I-MDR okanye Uhlolo lokuQinisekisa ukuVunywa
Ukuhlaziywa kwe-MDR okanye Ukubonakaliswa kokuQiniswa kokuBonakalisa yintlanganiso ekufuneka yenzeke kwisithuba seentsuku ezilishumi kwi-infraction yezenzo eziya kwenza ukuba umfundi asuswe kwindawo yakhe yangoku kwisikolo sikarhulumente ngaphezu kweentsuku ezili-10. Le yunombolo yokongeza: ngamanye amagama, ngexesha lonyaka omnye wesikolo xa umntwana enqunyanyisiwe okanye esuswe esikolweni, phambi kwelanga leshumi elinanye (11), isithili sesithili sifuna ukwazisa abazali.
Oku kuquka ukumiswa kweentsuku ezi-10.
Emva kokuba umfundi okhubazekileyo afike kwiintsuku ezingama-7 okanye ezili-8 zokumiswa, kuyaqheleka ukuba izikolo zizame ukulungisa ingxaki ngokukhawuleza ukuphepha ukuQiniseka koMboniso. Ukuba umzali akavumelani nomphumo wale ntla nganiso, asemandleni abo ukuba athathe isithili sesithili kwinkqubo efanele. Ukuba igosa levavanyo liyavumelana nabazali, isithili sinokufuneka ukuba inikeze ngemfundo ehlawuliswayo.
Yintoni eya kwenzeka emva kokuba i-MDR ibeka indawo?
I- MDR ibanjwe ukujonga ukuba ukuziphatha kukubonakalisa ukukhubazeka komfundi. Ukuba kuqinisekiswe ukuba, ngokwenene, yinxalenye yokukhubazeka kwakhe, ngoko iqela le-IEP kufuneka lichonge ukuba ngaba kungenelelo olulungileyo luye lwaba khona. Oko kufanele kubandakanye nokuba ne-FBA (Uhlalutyo lokuSebenza ngokuSebenzayo) kunye ne- BIP (UkuPhatha kokuPhatha koPhuculo okanye iSicwangciso soPhuculo) kusekho kwaye kulandelwe njengoko kubhaliweyo.
Ukuba ukuziphatha okuphathelene nokukhubazeka kwabafundi kuhanjiswe ngokufanelekileyo ne-FBA ne-BIP, kwaye inkqubo ilandelwe ngokunyaniseka, ukufakwa kwabafundi kungatshintshwa (ngokuvunyelwa kwabazali.)
Abafundi abanokuxilongwa nge-autism, ukuphazamiseka kwengqondo , okanye ukuchasana nokuphazamiseka kwengxaki kunokubonisa iimpawu ezinxulumene nokuxilongwa kwabo.
Isikolo sidinga ukubonelela ubungqina bokuba isikolo sibhekiselele ukuziphatha kwakhe okunobundlobongela, okungafanelekanga okanye okukhohlakeleyo, okuvela kumfundi oqhelekileyo wemfundo uza kufumana ukumiswa okanye ukuxoshwa. Kwakhona, ukuba kukho ubungqina obuqinileyo bokuthi ukuziphatha kuhanjiswe, ke utshintsho lokubekwa kwendawo yokumisela olukhuselekileyo lufanelekile.
Abafundi abanezinye izikhubazo bangabonakalisa ubugwenxa, ukukhubaza okanye ukungalunganga. Ukuba ukuziphatha kuhambelana nokukhubazeka kwabo (mhlawumbi ukungakwazi ukuqonda ukuziphatha kwabo) banokukwazi ukufumana i-FBA kunye ne-BIP. Ukuba akungahambelani nokuxilongwa kwabo, isithili (esaziwa njenge-Local Education Authority okanye i-LEA sinokusebenzisa inkqubo yoluleko oluqhelekileyo.) Emva koko ezinye izinto ezisemthethweni zisebenza, njengokuba kukho umgaqo-nkqubo wokuqeqesha oqhubekayo, nokuba isikolo silandele umgaqo-nkqubo nokuba ngaba uqeqesho lufanelekile ukuba lukhutshwe.
Xa uJonathon emiswa ngenxa yokugwaza omnye umfundi ngesisisi, i-MDR okanye ukuBoniswa kokuQinisekisa ukuQongwa kweziCwangciso kwakucwangcisiwe kwisithuba seentsuku ezilishumi ukukhetha ukuba ngaba uJonathon kufuneka ahlale kwisikolo sePine Middle School okanye abekwe kwizithili ezizodwa zokuziphatha.
Indawo yokuFunda eyiyo kunye nokuCelwa kweSikolo
7 Iinkcukacha zootitshala ababi
Indlela iNkokeli yeMfundo yeNtuthuko eyenza ngayo iSifundo seSiphumo seSikolo
Indlela yokudala iClassi eNgabhubhisiyo
Ubuchwepheshe bokuncedisa: Iipenki zePenki
Ukuphononongwa kokuCinga ngeMathe
Injongo yoQhagamshelwano: Isiseko soLwazi lwezakhono zoKwakha
I-Economics of Discrimination
I-Gettysburg College Photo Tour
I-80s I-Instrument Spotlight - iSaxophone
Imfazwe Yehlabathi II: Heinkel Yena 280
Ngaba Ufanele Uchaze Ibakala Elibi Xa Usebenzisa Ikholeji?
I-American Revolution: eNew York, Philadelphia, naseSaratoga
I-Florida Atlantic University (FAU)
Ukunyuka kwesenzo kwiNcwadi
10 Iindiza zeeNkwenkwezi ezazisula kwiSigaba
Ukwahlukana Phakathi kwe-Grand Grand and Baby Grand Pianos
I-Louisiana Serial Killer uRonald Dominique
Leo NgoCricricorn: Uthando lwabo luhambisana
Nyack College Admissions
Howard Aiken noGrace Hopper - Abangena kuMarko Ikhompyutha
IYunivesithi yaseBriar Cliff
I-Classic Love Songs Ukususela ngo-1920s ukuya kuma-1950
Inkondlo "ekhohlisayo": Isikhokelo sikaRobert Frost "Indlela engathatyathwayo"
Iisayinithi zexesha kwiNqaku loMculo